Afar maalgashi oo wanaagsan xagaaga iibka xagaaga 2017 | Ragga Stylish
Afar qaybood oo iibka ah oo aad xidhan karto deyrta
Dhowr toddobaad ka hor, waxaan kugu dhiirigelinnay inaad maal gashato jaakadaha aasaasiga ah inta lagu jiro iibka xagaaga ee hadda jira. Ka dib fikirkaas fikirka ah ee xilliga dayrta ama, waa maxay isku mid, dhar isku dhafan oo qaab ahaan ku sii jiri doona xilli ciyaareedka dambe, markan waxaan soo jeedinaynaa afar kale oo laga fiirsado.
In kasta oo ay wanaagsan tahay in laga faa'iideysto fursadda si loo dhammeeyo taabashada mustaqbalkeenna xagaaga, waxa ugu caqliga badan ayaa ah in diiradda la saaro kuwa waa inuu lahaadaa qaybo laba jibbaaraya sicirkooda xilliyada xaalado badan:
1 Kuwa boodboodaya ee wanaagsan
2 Dhididka aasaasiga ah
3 Surwaal shaati ah
4 Shaatiyada polo ee casriga ah
Kuwa boodboodaya ee wanaagsan
Inaad ku haysato waxoogaa boodboodayaal qurux badan labbiskaaga had iyo jeer waa dammaanad guul marka ay timaado sii taabasho casri ah muuqaalka caadiga ah ee jooniska iyo kabaha isboortiga. Waxay sidoo kale sameeyaan lamaane weyn oo Shiineys ah. Iyo haddii aad rabto inaad abuurto isku-dhafan nus-rasmi ah, ku dar suudh waxaadna leedahay isku-darka diyaar u ah xafiiska. Waxaan kugula talineynaa dhexdhexaad, dhejis iyo codad dhalaalaya, ugu yaraan midkiiba.
Dhididka aasaasiga ah
Dhididka aasaasiga ah waa mid ka mid ah maalgashiyada ugu wanaagsan xilliyada iibka, caadi iyo labadaba dabool iyo daboolid. Waxaad lahaan doontaa gabal isku mid ah oo aad isku dari kartid joggers, jiinis iyo xitaa surwaal dhar ah haddii aad rabto inaad ku siiso muuqaalkaaga saameyn isboorti oo casri ah. Hadana hadaad qaar haysatid, is waydii inaad u baahan tahay inaad cusboonaysiiso hubkaaga.
Surwaal shaati ah
Raadi ereyo sida lugta toosan, istareexsan oo jilicsan, ama lagu dhejiyay surwaalka dharkaaga, garkaaga, iyo jooniskaaga. Inkasta oo qaababka adag ay weli yihiin, surwaal bacaha wata ayaa ka mid ah isbeddellada sii kordhaya, oo kaliya maahan dayrta soo socota laakiin xilliyada soo socda.
Shaatiyada polo ee casriga ah
Sida funaanadaha isku dhejisan oo wanaagsan, waxay kaa caawin doonaan inaad sameysid isku-dhafan nus-rasmi ah, oo leh faa'iidada aan ku dhejin karno wixii hadda ka dambeeya. In kasta oo gaab gaab yahay, kaalay jiilaalka sidoo kale waxay boos ku yeelan kartaa muuqaalkaaga hoostaada. Waa wax in badan la arkay bilawgii sanadka, noqday yaabkii jiilaalka 2017.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Afar qaybood oo iibka ah oo aad xidhan karto deyrta
Sidee loogu raaxeystaa lamaanahaaga xeebta?
Dhibaatooyinka mindhicirka qaarkood xagaaga